सयौं हेलिकोप्टरको के अर्थ? हेर्ने र घुम्नेमात्र हो भने! « AayoMail
सयौं हेलिकोप्टरको के अर्थ? हेर्ने र घुम्नेमात्र हो भने!
2021,19 June, 3:31 pm
१ मिनेट भन्ने चीज कति बलियो! तल ट्राउट फार्मका हामी ३ घर त्यो १ मिनेटभित्रको खेलाले बाँचेका थियौँ, तर दुर्भाग्य हमा गुमायौं। तल घ तिर बाढीको अलिअलि सूचना आएको थियो तर हामीलाइ त त्यै नि पत्तो थिएन। तर त्यहाँभित्र चलेको त्यो १ मिनेट अदभूत थियो।
बाढी आउँदैछ भनेर भन्दा तिमीहरूले सुनेनौं भन्नेहरु पनि थिए। त्यहाँभित्र अरु कुराहरु छन्।
क. दशकअघि एकदम ठूलो बाढी आउँदा हाम्रै ह्याचेरीमात्रै छोएर गएको थियो।
ख. अर्को कुरो क्रसर उद्योगले गर्दा यता पनि खोलो खारिएकोले बाढी यसरी आउँदा त्यै बाटो समात्छ भन्ने थियो।
ग. ७०–८० वर्ष अगाडि खोलोमा बाढी आउँदा पनि त्यो ताण्डवले हाम्रा कुनै खेत नोक्सानी गरेकै होइन भन्ने हजुरबुवाहरु यहीँ छन्। यीलगायत अरु विविध कारणले यसरी यो रूप आउँछ भन्ने ज्ञात् हुने कुरै भएन। बाढी आएको रूप हेर्नुहुन्छ भने त्यो समुन्द्री छाल आएको भन्दा कम थिएन।
पारी घरबाट रामकुमारी, सरिता, अनिता दिदी र भिनाजु नआएका भए हामी रहन्नथ्यौं। यसअघि नै माथीबाट दीपक अङ्कल र दीपा आन्टी आएर तल भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिञ्जेल खोलोले काठ मात्रै बगाउँदै ल्याएको थियो। त्यसो त सधैं बर्खामा खोलामा यही दोहोरिन्थ्यो नै।
पारीबाट दिदीहरु आउनु अघि हामी कुलो सफा गर्दै थियौं, ट्राउटका भूराहरु जोगाउन भरपूर लागेका थियौं, ट्याङ्कीहरु सबै बालुवा र लेदोले भरिन थालिसकेका थिए। लगत्तै पारि घरका दिदीहरु आइसकेपछि मैले दिदीका छोराहरु र सुरज भाइलाई माथि पठाएँ र म पनि हिँडे !
घर पुगेको ४०–५० सेकेन्डमा यताउता गर्दा गर्दै उत्तिसघारी जोडले कराएको सुनियो, हेर्दा त खोलो तम्मासले उर्लिएछ १ कान्छी हजुरामालाइ समाएर हामी दौडन थाल्यौं। को कता थिए, पत्तो छैन। सबै तितरबितर। सबै सिम खेत हुँदै भागाभाग गर्दै माथि आइपुगेछन्। रूवाबासी चलेको थियो। सन्नाटा छाएको थियो।
काका र काकीहरु सबै बगाइसकेर अलिक तल्लो छेउका केराघारी समाएर आइपुगेछन्। हाम्रो ह्याचेरीका जस्ताहरुले थिचेछ, कतै भाइहरुले उद्दार गरेछन्। खोलो पारीबाट होइन मेरो घरको आँगनबाट बगेर आएको रहेछ। हजुरामा नभेटिनुको कारण चाहिँ हजुरामाले टाढाको बाटो समात्नुभएछ, भाग्दाभाग्दै हराउनुभयो।
खोलोमा बगेको लेदो ज्वालामुखीको लाभा भन्दा कम थिएन, मात्रै खोलोको लेदो कालो थियो। खेतहरू हेर्न गयौं। हाम्रो तलको बस्ती हेर्यौं। ठ्याक्कै लाङटाङ बगाएको चित्र देखिन्छ। पहिरोले मेलम्चीघ्याङ लडेको छ भन्ने सुनिन्छ तर आधिकारिक कुरो अझै पत्तो छैन।
लार्केतर्फ पनि विध्वंस मच्चिएकाले मेलम्चीको शीर ढुक्पुमा नै केही गड्बडी छ कि भन्ने अनुमान हो हाम्रो। माटोको प्रकृति अनुमान गर्दा बाढीमात्रै होइन लेकाली गाउँभन्दा मास्तिर गएको पहिरोसँगै हिमतालहरुमा समस्या भए कि भन्ने हो, यसको जवाफ खोजबाटै आउलान्।
ऐले तत्काललाई डोजरे विकास कारक देखेको छुइन। बरु अघिल्ला बाढीहरु हेर्दा पूर्णत डोजरले खनेका अनगिन्ती पहाडहरु बगेर आएका लेदोहरु फार्ममै भेटिन्थ्यो, यो पल्ट दृश्य भिन्न छ। बगेको लेदो सिमेन्टको घोलाको रङ्गको छ, अध्ययनको निष्कर्ष आउला भनौं।
सयौं हेलिकप्टरहरू घुमे, तर के अर्थ हेर्नै र घुम्नै मात्रै जाने हो भने? विपद व्यवस्थापन र खोज अध्ययनका पाटो होलान्, विज्ञ होलान् उनीहरुसँग राय सुझाव लिने बेला होइन र? उनीहरुलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा कसले दिने? फोकटमा घुम्ने होइन अध्ययन र निष्कर्षका निम्ति विज्ञ खटाउ!
इन्द्रावतीको बाढीले परिवारका सदस्य र घर गुमाएका दीपकिरण खड्काको अनुभूति उनको ट्वीटरबाट साभार